Somalia Waxay Gashay Jawi Kala Guura” | AWDALSTATE.COM – The First and the Official
Somalia Waxay Gashay Jawi Kala Guura”	Posted on June 5, 2012
Somalia waxay gashay jawi kala guura ” Tartanka beelaha iyo Tareenka Federalka”
05 June 2012 Waagacusub.com- Hello Saylici iyo Xaabsade, ma maqasheen in Xasan Dahir Aweys oo mudo dheer dadkiisa gumaadayay isu dhiibay Madaxtooyadda Somalia oo toog ama tarxiil suge yahay?
Ma maqasheen inuu yiri “ Wiilasha Isaaq Jihaad ma wadaane malaha xasuuqii Siyaad ka geystay Hargeysa 1988 ayey ka gooynayaan Shacabka Koofurta Somalia”
Ma ogtahiin inuu mudo dheer ahaa Facaa tuug ama Meermeer maatadiisa xasuuqay ama marqaati ka noqday sida idinka?
Xiliga waa kala guur ,laga guuraa Ku meel gaar iyo Colaad,loona guuraa Nabad iyo Dowladnimo loo dhan yahay.
Loolanka beelaha Soomaaliyeed waxaa safka hore uga jira Digil iyo Mirifle.Majeerteen,Dhulbahante,Habargidir,Mareexaan iyo Isaaq,waxaa ruclo xoogan ku jira beesha Gadabuursi oo Calaamatu su’aal dulsaaran tahay inuu tareenka ka tegi doono iyo inay tartanka beelaha ka qeybgali doonaan.
Hadii aad ka mid tahay beelaha Soomaaliyeed ogoow tartanka beelaha waa mid ku saleeysan dadaal iyo horumar degaan.
Beesha Dhulbahante waxay noqotay beeshii ugu dambeysay ee Tareenka kala guurka safka hore ka fuushay.
Haweenka Khaatuma State iyo Kuwa Awdal State waxay ku jiraan halgan dheer ,oo ay ku doonayaan inay degaanada beeshooda ku hormariyaan.
Dadaalka Gabdhaha Awdal State iyo Khaatuma State waa mid ku dayasha mudan oo ragga beelahas iyo Haweenka beelaha kale looga baahan yahay inay ku daydaan.
Awdal State waxay sanad kadib heshay taageero baaxadweyn ,sida Khaatuma State u heshay taageerada bulshada Soomaaliyeed %75.
Waa markii ugu horeeysay taariikhda ee Fanaaniin caana ka qeybgalaan xaflad loogu dabaaldegaayo Maamul goboleedyada Somalia,waxaana habeen ka hor Magaaladda Ottowa ka dhacay Xaflad balaaran oo lagu xusayay Sanadguurada Awdal State taas oo ay ka soo dhexmuuqdeen ,Fadumo Nakruma,Fartun Birimo,Cabdullahi Boqol,Kooshin,Cumar Boongo iyo Cabdiwahaab Cantar Naaji.
Taageerada Fanaaniintaan siiyeen Maamul goboleedka Awdal State waa mid xambaarsan laba weji.
Fanaaniinta waxay ka turjumayaan taageerada Shacabka,waa kuwa kiciya bulshada ,hab faneedna ku gaarsiiya Fariimaha,marka dhinaca kale laga eegana Xafladda ay Fadumo Nakrumo iyo Fartun Birimo ka heesaan waa la fahmi karaa shacbiyadeeda Qaran iyo mid beeleed.
Awdal State waxay taageero xoogan ka heleeysaa beelaha Hawiye iyo Daarood ,waxaase nasiib daro weyna in qaarkood la isku diray ,oo sedex reer loo qeybiyay halka looga fadhiyo inay bulshadooda wax u qabtaan.
Dad tiro yar ayaa taageersan Siyaasiyiin u dhashay beesha Samaroon oo ku jira Maamulka Siilaanyo laakiin kuwaas taageersan waxaan qormadeyda ku waydiin lahaa maxay dan u hayaan bulshada ay magacooda metelaan?
Garoomadda Hargeysa,Berbera iyo Burco waa shaqeeyaan oo waa la dayactiray ,sidoo kalena dekadda Berbera waa shaqeeysaa, Muxuu Garoonka Borama u xiran yahay? Maxay Dekadaha Saylac iyo Lughaye u xiran yihiin?
Adigoon qalad u fahmin qoraalkeeyga,qabaana u noqon qabiil kale,makula quman tahay inaad taageerto qorshe kasta oo loo mari karo in la hormariyo degaanada aad ka soo jeedo.
Si uusan tareenka kala guurka kaaga tegin waxaa quman inaad ogaato marxalada ay Somalia gasho.adigoo ku xisaabtamaya in Irsaaqadaad cuni lahayd ilaah toos kuu siin karo,adigoon cid kale u daba fariisan.
Galkacyo waxaa labadeeda gees ka jira laba Maamul oo lagu kala magacaabo Puntland iyo Galmudug,labaduba Caalamka ayaa aqoonsaday.
Puntland iyo Galmudug tee la hor sameeyay,teese maanta sareeysa?
Puntland ayaa la sameeyay 1998 laakiin Galmudug waxaa la sameeyay 8 sano kadib xilligaas 2006 hasse yeeshee nasiib wanaag maanta waa laba maamul oo siman.
Sidee ku tahay suurtagal?
Dadka u dhashay Galmudug ayaa diiday inay deb nin kale shitay dugaalsadaan,waxay Maamulka Puntland ku yiraahdeen DADAALAA WUU GAARAA,HADUU CIRKA SOO DUMANA MEESHAAD KA GASHAAN AYAAN KA GALEEYNAA.adiguna waxaa lagaa doonayaa inaan marna qabiil kale kuu dowladeeyn oo aad ku dayataan Bulshada Galmudug.
QOF KU YIRI,SINAAN MEYNO,ADNA BURI SAREEYNTIISA,SAGAAL BAAD KU DHALATEE,MA SAGAASHANBAA TIISA.
Hadii qalbigaaga cabsi ku jirto,Maamulka Siilaanyo oo Ciidan ku filan heysta wuxuu loodin waayay,oo fooda gelin waayay Magaaladda Buhodle (Beesha degta Buhodle iyo bulshada Koofurta Galkacyo maxaa isku galay?
Bulshada Buhodle marna gob dheh,marna geesiyiin dheh ,maxaa yeelay waxay noqdeen talis adag oo cidii ka soo cabsata Puntland iyo Somaliland ka dhigtaan Gabaad.
Taangi kastoo lagu weeraro Sooljoogto loo dhaafi waa, laakiin su’aasheeydu waxay tahay Reer Borama goormee ka bixi doonaan Nidaamka Dhardhaaradda Ee Hoojiyay oo si wadajira ugu jeesan doonaan sidii ay tartanka beelaha uga qeybgeli lahaayeen.
Qurbaha kama jiraan qabiileeysiga lagu dhex tuuray reer Borama balse fariintu waxay tahay inaysan noqon sedexdii dibbi.
Cid walboow ka qeybgal tartanka Nabadda iyo Qaranimada Soomaaliyeed,kana tanasul colaad iyo awood ku faan qabiil.
Dadkaagu waxay u baahan yihiin taageero,taageeraduna waa wax tar ee taqaantuqo maaha.
Inaad noqoto FACAA TUUG ,halna ku tiri ma doonto,taariikh xuna waad ka tegi,bulshada waxay kuugu yeeri doonaan Meermeer.
Bulshooy halku dhig maka dhiganaa “NAFTIISA U SHAQA TAGE LAGA TASHAY”
Su’aal muhiima hadaan idinkaga tago Xasan Dahir Aweys ma sii deyn buu mudan yahay mise daldalaad?
This post has been viewed 1482 times.Gaadhsi Dadka:MoreEmailLike this:Like Loading...